Horudhac: Chelsea vs Bournemouth … (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulan ka dhacaya garoonka Stamford Bridge) – Gool FM
(London) 14 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa maanta doonaysa inay guul ka gaarto Bournemouth ayaa eegeysa inay xoojisato booskiisa afarta sare ee horyaalka Premier League.
Si kastaba ha noqotee, Blues ayaa kaliya saddex dhibic ka soo heshay 12 suurtogal u ahaa, halka Kooxda Cherries ay la kulantay shan guuldarro oo xiriir ah kulammada horyaalka.
Chelsea ayaa weli weynaysa dafaceeda dhexe ee Fikayo Tomori, kaasoo aan ka soo muuqan waajibaadka Champions League Talaadadii sababo la xiriira dhaawac uu qabo sinta.
Antonio Rudiger ayaa qarka u saaran inuu sii wado ka ciyaaristiisa daafaca, halka Mason Mount uu ku soo laaban karo safka kaddib markii laga saaray bartamihii isbuuca.
Dhibaatada dhaawaca Bournemouth ayaa sii socota, iyadoo Callum Wilson iyo Nathan Ake ay ka mid yihiin siddeed ciyaaryahan oo waa weyn oo maqnaan doona.
Joshua King ayaa ku tartamaya inuu soo laabto, halka Harry Wilson uu soo laaban doono kulankan kaddib markii uu u qalmi waayey inuu wajaho kooxdii milkiyadiisa lahayd ee Liverpool.
David Brooks ayaan la heli doonin illaa bisha Maarso kaddib qalliin markiisii labaad looga sameeyey canqowga.
>- Chelsea ayaa u dhaxaysay guul iyo guuldarro afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay horyaalka Premier League naadiga Bournemouth, iyadoo xilli ciyaareedkii hore kulan ku badiyey 2-0.
>- Tan iyo markii ay Bournemouth u soo dalacday horyaalka Premier League sanadkii 2015-kii, kaliya Liverpool oo 3 goor ay ku garaacday Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge ayaa ka badan inta ay ku garaacday Cherries oo labo ah.
>- 15 kulan oo dhexmaray Chelsea iyo Bournemouth tartammada oo dhan ma jiro kulan barbaro ku dhammaaday, Blues ayaana adkaaday 11 ka mid ah kulamadaas.
>- Chelsea ayaa khasaaro la kulantay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey Premier League, halka kulan oo kale waa ay guuleysatay, waana in ka badan intii ay sameeyeen 20 kulan markaas ka hor tartankan (12 Guul, 5 Barbaro iyo 3 Guuldarro).
>- Bournemouth ayaa khasaaro la kulantay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, markii ugu dambeysay oo kulabo badan oo xiriir ah ay horyaalka guuldarro la kulanto waxay ahayd bishii September sanadkii 1994-kii, markaasoo ay todobo kulan oo xiriir ah guuldarro la kulantay.
>- Bournemouth ayaa guuldarro la kulantay lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay ku ciyaartay magaalada London, iyadoo laga dhaliyey 20 gool, wadar ahaan waxa ay guuleysteen kaliya lix ka mid ah 24-kii kulan ee ugu sarreysay horyaalka oo ay ku ciyaareen Caasimadda (3 Barbaro iyo 15 Guuldarro), iyagoo 33% guulahaas ay ka gaaray Chelsea.
>- Chelsea ayaa khasaaro la kulatay labo ka mid ah siddeedii kulan ee horyaalka Premier League ay ku ciyaartay garoonkeeda xilli ciyaareedkan (4 Guul iyo 2 Barbaro), waana in ka badan intii ay sameeyeen guud ahaan xilli ciyaareedkii 2018-19 oo ay ka hoos ciyaarayeen macallin Maurizio Sarri (12 Guul, 6 Barbaro iyo 1 Guuldarro).
>- Kaliya Manchester City (337) ayaa sameysay shuudad ka badan Chelsea horyaalka Preier League xilli ciyaareedkan (274), Blues ayaana cel-celis ahaan kulankiiba shuuday 17.1 waana heerkoodii ugu fiicnaa hal xilli ciyaareed tan iyo kal ciyaareedkii 2013-14 oo ay kulankiiba sameeyeen 18.2 shuudad ah.